သတိလက်လွတ် ထုပ်ပိုးခြင်း Trenbolone Acetate Steroids Tren A Powder 100% ဘေးကင်းသော အကောက်ခွန် ရှင်းလင်း CAS 10161-34-9
အခြားအမည်-ရထား Ace၊ ရထား A၊ Finaplix၊ Revalor-h
အလင်းတန်း-trenbolone acetate စတီရွိုက်၊ trenbolone enanthate အမှုန့်
Trenbolone Acetate CAS နံပါတ်: 10161-34-9
Trenbolone Acetate စစ်ဆေးမှု- 97.0 ~ 101.0%
Trenbolone Acetate ဖော်ပြချက်- အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဝါနုရောင် ပုံဆောင်ခဲမှုန့်
Trenbolone Acetate လုပ်ဆောင်ချက်- ဟော်မုန်းဆေးများ၊ anabolic အေးဂျင့်။
အသုံးပြုမှု- Trenbolone Acetate ကို ဆေးဝါးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။Anabolic အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင် ကြွက်သားထုထည်နှင့် ခွန်အားကြီးထွားမှု၊ အရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် ခွန်အားတိုးလာမှု၊ မျဉ်းသားကြီးထွားမှုနှင့် အရိုးရင့်ကျက်မှုကို လှုံ့ဆော်မှုတို့ ပါဝင်သည်။
Trenbolone Acetate သည် ရနိုင်သော အကောင်းဆုံး ရာသီမကူးနိုင်သော စတီးရွိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်များပြားစွာထုပ်ပိုးပြီး ကြီးမားသောခွန်အားကိုရရှိစေရုံသာမက သမားရိုးကျ များပြားလှသော စတီးရွိုက်များထက် ပိုမိုသန့်ရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသော Tren ပုံစံမဟုတ်သော်လည်း Trenbolone Acetate ကို အားကစားသမားအများစုက နှစ်သက်ကြသည်။ဤဗားရှင်းဖြင့် အထွတ်အထိပ်နှင့် တည်ငြိမ်သော သွေးပမာဏကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပေါင်းစပ်သည့်အခါ Trenbolone Acetate ကို ဘုရင်များဘုရင်အဖြစ် လူအများက အဘယ်ကြောင့် ခေါ်ဆိုကြသည်ကို သိရန်မှာ မခဲယဉ်းပါ။
Trenbolone ကို acetate (Finaplix, Finajet), enanthate, သို့မဟုတ် cyclohexylmethylcarbonate (Parabolan) အဖြစ် steroid လည်ပတ်မှုတွင် တစ်ဦးတည်းသော anabolic အဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
ဤအရာပြီးသောအခါတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အမြတ်များ အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ယင်းအစား၊ trenbolone ကို Dianabol သို့မဟုတ် Testosterone ဖြင့် တွဲထားသင့်ပြီး အသုံးအများဆုံးနှင့် အသင့်လျော်ဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Trenbolone acetate သည် Finaplix ရှိ တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်း၏ ဓာတုအမည်ဖြစ်သည်။Finaplix သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်/သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံများတွင် Roussel Uclaf Corporation ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖော်ပြချက် အဝါရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် ပုံဆောင်ခဲမှုန့်။
လေးလံသောသတ္တုများ ≤20 ppm လိုက်လျောညီထွေ
အတိအကျလှည့် +46°~+51° +49.3°
အရည်ပျော်မှတ် 72 ~ 78ºC 74~76ºC
Nandrolone၊ Trenbolone၊ Boldenone၊ Methenolone စီးရီးပုံများ
၁)။Trenbolone-Acetate သည် သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားသော anabolic ဟော်မုန်း IGF-1 ကို အလွန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်တိုင်းနီးပါးကို သက်ရောက်မှုရှိသော peptide class ၏ အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟော်မုန်းဖြစ်သည်။
၂)။Trenbolone-Acetate သည် သွေးနီဥဆဲလ်အရေအတွက်ကို တိုးစေပြီး ကြွက်သားများတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ထိန်းထားမှုကို တိုးမြင့်စေသည်။
၃)။Steroids အများစုကဲ့သို့ Trenbolone-Acetate သည် ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး Tren-a ရှိနေသောအခါတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုအဆင့်ဖြင့် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပါသည်။တဖန်၊ များစွာသော စတီရွိုက်များသည် Tren-a သည် ဤလက္ခဏာကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ၎င်းကို ပိုကောင်းစေသည်။
၄)။Trenbolone-Acetate ပိတ်ဆို့ပြီး glucocorticoid ဟော်မုန်းများကို လျှော့ချပေးသည်။ကြွက်သားတစ်သျှူးများကို ဖျက်ဆီးပြီး အဆီတိုးစေသော ဟော်မုန်းများ။
၅)။Trenbolone-Acetate သည် အာဟာရ ထိရောက်မှု သို့မဟုတ် အစာကျွေးမှု ထိရောက်မှုကို အလွန်တိုးစေသည်။Trenbolone-Acetate တင်ပြခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်စားသော အာဟာရများကို အမှန်တကယ် မြှင့်တင်ပေးသည်၊ ၎င်းတို့သည် ပိုတန်ဖိုးရှိလာကာ ၎င်းတို့ထံမှ ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Trenbolone Acetate ချက်ပြုတ်နည်းများ
10 ဂရမ် Trenbolone Acetate အမှုန့် (7.5 mL)
ဆီ 70.5 ml
ဆီ 75.5 ml
အားလုံးက မင်းရဲ့ အဆီတွေ ဘယ်လောက်ပိန်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။Tren သည် co-solvent နည်းပါးသော (BB) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။
100mL အတွက် အသုံးများသော 100mg/mL ချက်နည်း BB မရှိပါ။
ဆီ 87.5 မီလီလီတာ
100mL EO အတွက် 200mg/mL ချက်ပြုတ်နည်း၊ ဆီမပါပါ။
20 ဂရမ် Trenbolone Acetate အမှုန့် (15 mL)
Trenbolone Acetate Powder: 391.5 ဂရမ်
Benzyl အရက်- 78.6 ml
ဆီ 180 ml
သတင်း- Testosterone propionate 100-150mg eod၊ 6-8 ပတ်၊
Trenbolone acetate 75-100mg eod၊ 6-8 ပတ်၊ PCT နောက်ဆုံး prop ထိုးပြီးနောက်4ရက်။
အလယ်တန်း- Testosterone enanthate 750mg တစ်ပတ်လျှင် 1-12 ပတ်
Trenbolone enanthate 400mg တစ်ပတ်လျှင် ရက်သတ္တပတ် 1-12
Primobolan 600mg တစ်ပတ်လျှင် ရက်သတ္တပတ် ၁-၁၀
Testosterone propionate 200mg eod ပတ် ၁-၁၂
Trenbolone enanthate 400mg တစ်ပတ်လျှင် ရက်သတ္တပတ် 1-10
အဆင့်မြင့်- Primobolan 600mg တစ်ပတ်လျှင် ရက်သတ္တပတ် ၁-၁၀
Testosterone enanthate 1000mg တစ်ပတ်လျှင် ရက်သတ္တပတ် 1-12
Trenbolone enanthate 500-700mg တစ်ပတ်လျှင် ရက်သတ္တပတ် 1-12
Anavar 80-100mg ed၊ ရက်သတ္တပတ် ၁-၁၄
အလွန်အဆင့်မြင့်/ပြိုင်ပွဲအကြို- Testosterone propionate 100-200mg ed
Masteron 400-600mg တစ်ပတ်လျှင်
Primobolan 600mg တစ်ပတ်လျှင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဆေးဝါးနယ်ပယ်တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှု ဦးဆောင်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို ပို့ဆောင်သည့်နေရာများ- US၊ UK၊ Canada၊ Australia၊ Brazil၊ Russia၊ Portugal၊ Latvia၊ Switzerland၊ Iceland၊ Ukraine၊ Germany, France, Netherlands, Belgium, Peru, Sweden, New Zealand, Czech Republic, Lithuania, Ireland တူနီးရှား၊ မက္ကဆီကို၊ ဂရိ၊ ပွာတိုရီကို၊ ထိုင်း၊ အစ္စရေးစသည်ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှ အလွန်ကောင်းမွန်သော တုံ့ပြန်ချက်ရရှိထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှည်လျားသောဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။
2. သတိပညာရှိ အထုပ်။
အရည်အသွေးမြင့်ကြောင်း အာမခံပါသည်၊ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာတွေ့ရှိပါက ပက်ကေ့ခ်ျကို သင့်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါမည်။
အမြန် (FedEx၊ UPS၊ DHL၊ EMS) ဖြင့် သင်္ဘောဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်း။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရှိဆုံး forwarder ပဲဖြစ်မှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် စတော့ရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့တွင် အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။
6. သင့်အတွက် နွေးထွေးသော ရောင်းပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု။
မင်းရဲ့မေးခွန်းတိုင်းကို တတ်နိုင်သမျှ အရင်ဆုံးဖြေရှင်းပေးမယ်။နိယာမကို လိုက်နာခြင်း။
ဖောက်သည် ပထမဆုံး ခံယူချက်။အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးနဲ့ အရိုးသားဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးသွားမှာပါ။
7. အရည်အသွေးမြင့်၊ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း၊ ပထမတန်းစားဝန်ဆောင်မှု၊ မြင့်မားသောအောင်မြင်သော ပို့ဆောင်မှုနှုန်း။
Nandrolone Phenypropionate (Durabolin)၊
Trenbolone Enanthate (ပါရာဘိုလန်)
Trenbolone Hexahydrobenzyl ကာဗွန်နိတ်
Drostanolone Propionate (မာစတာရွန်)
Superdrol အမှုန့် (methyl-drostanolone)
Methenolone စီးရီးများ (Primobolan)
Sildenafil Citrate ၊
ယခင်- Trenbolone Acetate ကုန်ကြမ်း Steroids အမှုန့် Tren A ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအတွက် မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု CasNO.10161-34-9
နောက်တစ်ခု: Trenbolone Enanthate ဖြတ်တောက်ခြင်း Cycle Steroid Parabolan Tren E Powder CasNO.472-61-5